Wednesday February 27, 2019 - 07:15:47 in Wararka by Liibaan Jeexoow
Waxaa lagu dhawaaqay in markii 2aad uu Maxamed Bukhaari uu noqday madaxweynaha wadanka Nigeria, guddiga doorashada ayaa sheegay in Bukhaari uu helay in kabadan 5 malyan oo cod wuxuuna ka adkaaday Ninka lagu magacaabo Catiiq Abuubakar madaxweyne ku xigeenkii hore ee Nigeria.
Dabaal degyo ay dhigayaan Tobanaan kun oo kamid ah taageerayaasha Max'med Bukhaari ayaa ka dhacay magaalooyinka waaweyn ee wadanka Nigeria, goor sii horraysay Bashiir Axmed oo ah Afhayeenka Bukhaari ayaa si hordhac ah guushiisa ugu faafiyay bartiisa Twitter-ka.
lama oga in kooxaha mucaaradka ah ay aqbali doonaan guusha Max'med Bukhaari oo sanadadii lasoo dhaafay ka sheeganayay xanuun isagoona dhowr bilood oo noloshiisa kamid ah ku qaatay isbitaallo dibadda kuyaal.
Mas'uul Xog sir ah ka haya Max'med Bin Salmaan oo dibadda ubaxsaday.
Doorashooyinka madaxtinimada DF oo la sheegay in ay udhacayaan waqtigii loogu talagalay.
Maamulka 'Puntland' oo digay in dib loo dhigo doorashooyinka madaxtinimada DF.